Sehlulekile ukulawula ukuguquguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu kuyinkinga ebengeke ibe yimbi kangako ukube abantu bebefunde ukunakekela iplanethi futhi bangayilimazi becabanga ukuthi izinsiza zayo azinamkhawulo. Ukuphuma okuqhubekayo kwamagesi abamba ukushisa, okubandakanya i-carbon dioxide ne-methane, kubangele ukuthi ibhalansi yemvelo ilahleke, kuze kube seqophelweni lokuthi sikwazi ukungena enkathini entsha yokwakheka komhlaba I-Anthropocene.
Yize izinyathelo zingathathwa ukuvimbela imiphumela yokuguquguquka kwesimo sezulu ukuthi ingalimazi, bona babengeke bakhonze ukuyivimba ngokocwaningo olwenziwe ngochwepheshe abavela e-United States nase-Germany olushicilelwe kumagazini i-'Nature '.
"Iwindi lamathuba," eliqanjwe ngososayensi futhi ongomunye wababhali besifundo uRobert Pincus waseYunivesithi yaseColorado eBoulder, liyavalwa. Uma sifuna ukuvimbela izinga lokushisa lomhlaba ekukhuleni okungaphezu kuka-1,5 degrees Celsius, kuzofanele sisebenze ngokushesha okukhulu futhi siyeke ukusebenzisa izinto zokubasa ezimbiwa phansi nokunye ukungcola. Futhi noma kunjalo, kungaba nzima uma ukufudumala kweziqu ezimbili noma ezintathu kungenzekanga.
Ukubheka lokhu, kubalulekile ukuqonda ukuthi sekuyaphuthuma esintwini ukuthi sazi ngokwenzeka esimweni sezulu seMhlaba, ngoba uma kungenjalo izimpilo eziningi zingasongelwa njengoba izinga lokushisa landa futhi uncibilike lushesha.
El ukutadisha, ngokususelwa ekubhekweni okuqondile kokuguquka kwesimo sezulu nasekufundweni kwamandla olwandle okuncelisa ikhabhoni nezinhlayiya ezintanta emkhathini, kungathathwa njengesixwayiso. Isexwayiso sokuthi sisele nesikhathi esincane sokuthatha izinyathelo ezisebenza ngempela ezisebenza ukuze amadolobha kanye namadolobha athole okungenani ithuba elilodwa lokuzivumelanisa nezwe eliya liguquka.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Sehlulekile ukulawula ukuguquguquka kwesimo sezulu